လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုမရေရာမှုအောက်တွင် (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သုတ်ခြင်း
လူအတော်များများဟာလိင်ကလိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆန္ဒပြည့်ခံယူနိုင်ရန်အတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိပစ္စည်းနှိုးဆွကြည့်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် browsing အခါ, တစ်ဦးချင်းစီအားလုံးဖြစ်နိုင်သည်အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များမှဦးဆောင်အများအပြားဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်ရှိသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသုတေသနမရေရာဒွိဟအောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်များအစောပိုင်းကဆုံးဖြတ်ချက်များအောက်ပါလက်ခံရရှိအကျိုးဆက်များကလွှမ်းမိုးဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လိင်စိတ်နိုးထအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မယ်ထို့ကြောင့်ရေရှည်မှာမဲ့ဖြစ်စေသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသင့်ပါတယ်။
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့ 82 လိင်ကွဲ, အထီးသင်တန်းသားများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံတွေကိုစောင့်ကြည့်လိင်စိတ်နိုးထဖို့လေးစားမှုသူတို့နှင့်အတူ rated နှင့်မတိုင်မီလိင်စိတ်နိုးထသူတို့ရဲ့လက်ရှိအဆင့်ကိုညွှန်ပြဖို့တောင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုအောက်ပါခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက်ဘာသာရပ်များ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုအားနည်းချက်များကိုကဒ်ကုန်းပတ်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အပေါ်အကျိုးရှိခြင်းနှင့်ကြားနေဓါတ်ပုံတွေပေါ်မှာပြသခဲ့ကြသည်ထားတဲ့အတွက်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုနှစ်ခုပြုပြင်ထားသောဗားရှင်း၏တဦးတည်းဖျော်ဖြေn = 41 /n = 41) ။ ရလဒ်များသည်လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံတင်ဆက်မှုအပြီးတွင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများသည်အားနည်းချက်များရှိသောကုန်းပတ်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံသည့်ဓါတ်ပုံများကိုလိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများအားအကျိုးရှိသောကုန်းပတ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည်ပိုမိုဆိုးရွားသည်။ ပုဂ္ဂလိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသည်အလုပ်အခြေအနေနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်အကြားဆက်နွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ တီမိမိအလေ့လာမှုလိင်စိတ်နိုးထအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီကျဘာအသုံးပြုမှုများ၏အခြေအနေတွင်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုတွေ့ကြုံခံစားရှင်းပြရသောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အတူဝငျရောကျစှကျကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
Ariely, D. , & Loewenstein, G. အ (2006) ။ အချိန်ကာလ၏အပူ - လိင်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအပေါ်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အပြုအမူဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဂျာနယ်, 19, 87-98 ။ Doi:10.1002 / bdm.501. CrossRef
Arnow, BA, Desmond, je, Banner, ll, ဂလိုဗာ, GH, ရှောလမုန်, အေ, Polan, ML, et al ။ (2002) ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲအထီးအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ။ ဦးနှောက်, 125, 1014-1023 ။ Doi:10.1093 / ဦးနှောက် / awf108. CrossRef
Bancroft, ဂျေ, ဂရေဟမ်, CA, Janssen, အီး, & Sanders, SA (2009) ။ dual-control model: လက်ရှိအနေအထားနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 46, 121-142 ။ Doi:10.1080 / 00224490902747222. CrossRef
Bechara, အေ (2007) ။ အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို Professional ကလက်စွဲစာအုပ်။ Lutz: စိတ်ဓာတ်အကဲဖြတ်အရင်းအမြစ်များ။
Bechara, အေ, Damasio, အိပ်ချ်, & Damasio, AR (2000a) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် orbitofrontal cortex ။ ဦးနှောက် Cortex, 10, 295-307 ။ Doi:10.1093 / cercor / 10.3.295. CrossRef
Bechara, အေ, Damasio, အိပ်ချ်, & Damasio, AR (2003) ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် amygdala ၏အခန်းက္ပ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်, 985, 356-369 ။ Doi:10.1111 / j.1749-6632.2003.tb07094.x. CrossRef
Bechara, အေ, Damasio, R. , Damasio, H. , & Anderson, SW (1994) ။ လူ့ prefrontal cortex ကိုပျက်စီးစေခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်အကျိုးဆက်များအပေါ်အာရုံမခံစားနိုင်မှု။ သိမှတ်ခံစားမှု, 50, 7-15 ။ Doi:10.1016/0010-0277(94)90018-3. CrossRef
Bechara, အေ, Damasio, အိပ်ချ်, Damasio, AR, & Lee က, မိသားစုဆရာဝန် (1999) ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လူ့ amygdala နှင့် ventromedial prefrontal cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောပံ့ပိုးမှုများကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 19, 5473-5481 ။
Bechara, အေ, Damasio, အိပ်ချ်, Tranel, D. , & Damasio, AR (1997) ။ အကျိုးရှိရှိမဟာဗျူဟာကိုမသိမီအကျိုးရှိရှိဆုံးဖြတ်ခြင်း။ သိပ္ပံ, 275, 1293-1295 ။ Doi:10.1126 / science.275.5304.1293. CrossRef
Bechara, အေ, & မာတင်, EM (2004) ။ ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုရှိသူများအတွက်မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း။ Neuropsychology, 18, 152-162 ။ Doi:10.1037 / 0894-4105.18.1.152. CrossRef
Bechara, အေ, Tranel,,, & Damasio, H. (2000b) ။ ventromedial prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူလူနာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုငွေပြမှု၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ဦးနှောက်, 123, 2189-2202 ။ Doi:10.1093 / ဦးနှောက် / 123.11.2189. CrossRef
Bolla, KI, Eldreth, DA, လန်ဒန်, ED, Kiehl, ka, Mouratidis, အမ်, Contoreggi, C တို့, et al ။ (2003) ။ တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဝန်ဖျော်ဖြေ abstinent ကင်းချိုးဖောက် Orbitofrontal cortex ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ NeuroImage, 19, 1085-1094 ။ Doi:10.1016/S1053-8119(03)00113-7. CrossRef
Bowman, CH, & Turnbull, OH (2003) ။ Iowa Gambling Task ပေါ်ရှိ Real နှင့်ဖက်စ်အားဖြည့်ပစ္စည်းများ။ ဦးနှောက်နှင့်အသိမှတ်ခံစားမှု, 53, 207-210 ။ Doi:10.1016/S0278-2626(03)00111-8. CrossRef
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, & Altstötter-Gleich, C. (2008) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းလောင်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - အန္တရာယ်များသောအခြေအနေများနှင့်ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းအားဖြင့်အကျိုးရှိရှိဆုံးဖြတ်ခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုအတွက်အထောက်အထား။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 45, 226-231 ။ Doi:10.1016 / j.paid.2008.04.003. CrossRef
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Labudda, K. , & Markowitsch, HJ (2006) ။ စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးနှင့်အန္တရာယ်များအခြေအနေများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ Neuropsychological ဆက်စပ်မှု။ အာရုံကြောကွန်ယက်, 19, 1266-1276 ။ Doi:10.1016 / j.neunet.2006.03.001. CrossRef
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, & Markowitsch, HJ (2009) ။ တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူနှင့်မပါဘဲဆုံးဖြတ်ချက်: ထောက်လှမ်းရေး၏အခန်းကဏ္,, မဟာဗျူဟာများ, အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်သိမြင်မှုစတိုင်များ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ် Neuropsychology ၏ဂျာနယ်, 31, 984-998 ။ Doi:10.1080 / 13803390902776860. CrossRef
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Schächtle, U. , Schöler, တီ, & Altstötter-Gleich, C. (2011) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း - လိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်များနှင့်အင်တာနက်လိင်ဆိုဒ်များကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - စိတ်ရောဂါလက္ခဏာများ၏အခန်းကဏ္။ ။ Cyberpsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 14, 371-377 ။ Doi:10.1089 / cyber.2010.0222. CrossRef
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Recknor, EC, Grabenhorst, အက်ဖ်, & Bechara, အေ (2007) ။ မရေရာဒွိဟဖြစ်နေသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အန္တရာယ်အောက်ရှိဆုံးဖြတ်ချက်များ - အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်လောင်းကစားလုပ်ငန်းနှစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ သွယ်ဝိုက်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောစည်းမျဉ်းများ။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ် Neuropsychology ၏ဂျာနယ်, 29, 86-99 ။ Doi:10.1080 / 13803390500507196. CrossRef
Buelow, MT, & Suhr, JA (2009) ။ အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်၏တရားဝင်မှုကိုတည်ဆောက်ပါ။ Neuropsychology ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 19, 102-114 ။ Doi:10.1007/s11065-009-9083-4. CrossRef
Cohen ကို, ဂျေ, Cohen ကို, P. , အနောက်, စင်ကာပူဒေါ်လာ, & Aiken, LS (2003) ။ အဆိုပါအမူအကျင့်သိပ္ပံအဘို့အမျိုးစုံဆုတ်ယုတ် / ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလျှောက်ထား။ Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum ။
Cooper က, အေ, Delmonico, D. , Griffin-Shelley, အီး, & Mathy, R. (2004) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု - ပြpotentiallyနာဖြစ်နိုင်သည့်အပြုအမူများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့် 11, 129-143 ။ Doi:10.1080 / 10720160490882642. CrossRef
Cooper, အေ, McLoughlin, IP, & ကမ့်ဘဲလ်, KM (2000) ။ ဆိုက်ဘာအာကာသအတွင်းလိင်: 21 ရာစုအတွက် update ကို။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ၊ 3, 521-536 ။ Doi:10.1089 / 109493100420142. CrossRef
က de Vries, အမ်, ဟော်လန်, RW, & Witteman, CLM (2008) ။ အနိုင်ရတဲ့စိတ်သဘောထားမှာ - အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းမှာအကျိုးသက်ရောက်ပါ။ တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း, 3, 42-50 ။
Dolan, RJ (2002) ။ Emotion, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အမူအကျင့်။ သိပ္ပံ, 298, 1191-1194 ။ Doi:10.1126 / science.1076358. CrossRef
Dolcos, အက်ဖ်, & ဆက်မက်ကာသီ, G. အ (2006) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံအားဖြင့်သိမြင်မှုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဖြန်ဖြေ ဦး နှောက်စနစ်များ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 26, 2072-2079 ။ Doi:10.1523 / JNEUROSCI.5042-05.2006. CrossRef
Döring, မိုင် (2009) ။ လိင်မှုအပေါ်အင်တာနက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - ၁၅ နှစ်တာသုတေသနအတွက်ဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 25, 1089-1101 ။ Doi:10.1016 / j.chb.2009.04.003. CrossRef
Dunn, bd, Dalgleish, T. , & Lawrence, အေဒီ (၂၀၀၆) ။ အဆိုပါ somatic အမှတ်အသားအယူအဆ: တစ် ဦး ကဝေဖန်အကဲဖြတ်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, 30, 239-271 ။ Doi:10.1016 / j.neubiorev.2005.07.001. CrossRef
Erk, အက်စ်, Kleczar, အေ, & Walter, အိပ်ချ် (2007) ။ စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အလုပ်အတွက် Valence- တိကျတဲ့စည်းမျဉ်းသက်ရောက်မှု။ NeuroImage, 37, 623-632 ။ Doi:10.1016 / j.neuroimage.2007.05.006. CrossRef
Gotoh, အက်ဖ် (2008) ။ မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များလုပ်ဆောင်နေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေ valence ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ စိတ်ပညာ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 43, 59-71 ။ Doi:10.1080 / 00207590701318306. CrossRef
Goudriaan, AE, Oosterlaan, J. , Beurs, ED, & Brink, WVD (2005) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများ, အရက်မှီခို, Tourette syndrome ရောဂါနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားနှိုင်းယှဉ်။ သိမှုဦးနှောက်သုတေသန 23, 137-151 ။ Doi:10.1016 / j.cogbrainres.2005.01.017. CrossRef
Griffiths က, အမ် (2001) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်: အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်းများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဂယက်ရိုက်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 38, 333-342 ။ Doi:10.1080 / 00224490109552104. CrossRef
Grov, C တို့, Gillespie, BJ, Royce, တီ, & လီဗာ, ဂျေ (2011) ။ လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအွန်လိုင်းလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှု၏ရလာဒ်များ - အမေရိကန်အွန်လိုင်းစစ်တမ်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40, 429-439 ။ Doi:10.1007 / s10508-010-9598-z. CrossRef
Hald, GM, & Malamuth, nm (2008) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏မိမိကိုယ်ကိုမြင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 37, 614-625 ။ Doi:10.1007/s10508-007-9212-1. CrossRef
Hamann, အက်စ် (2001) ။ စိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်၏သိမှုနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ။ သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, 5, 394-400 ။ Doi:10.1016/S1364-6613(00)01707-1. CrossRef
Holstege, G. အ, Georgiadis, JR, Paans, AMJ, Meiners, LC, ဗန် der Graaf, FHCE, & Reinders, AATS (2003) ။ လူ့အထီးသုတ်ရည်လွှတ်စဉ်အတွင်း ဦး နှောက် activation ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 23, 9185-9193 ။ Doi:10.1097/WNR.0b013e3280b10bfe.
Janssen, အီး (2011) ။ အမျိုးသားများတွင်လိင်စိတ်နိုးထ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုများနှင့်အယူအဆရေးရာဆန်းစစ်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ, 59, 708-716 ။ Doi:10.1016 / j.yhbeh.2011.03.004. CrossRef
Janssen, အီး, Everaerd, ဒဗလျူ, Spiering, အမ်, & Janssen, ဂျေ (2000) ။ လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏အလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်များနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း - လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲပုံစံဆီသို့။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 37, 8-23 ။ Doi:10.1080 / 00224490009552016. CrossRef
Janssen, အီး, Prause, N. , & Geer, JH (2007) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ JT Cacioppo, LG Tassinary နှင့် GG Berntson (Eds ။ ) တွင်၊ psychophysiology ၏လက်စွဲစာအုပ် (3rd ed ။ , စစ။ 245-266) ။ နယူးယောက်: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကနှိပ်ပါ။ CrossRef
Kahneman, ဃ (2003) ။ တစ်ဦးကတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ရှေးခယျြမှုအပေါ်ရှုထောင့်: မြေပုံကမ္ဘာ၏ကျိုးကြောင်းကာရံထားခြင်းခံရသည်။ အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်, 58, 697-720 ။ Doi:10.1037 / 0003-066X.58.9.697. CrossRef
Kalmus, အီး, & Beech, အေ (2005) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၏မှုခင်းအကဲဖြတ်: တစ် ဦး ကပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်အပြုအမူ, 10, 193-217 ။ Doi:10.1016 / j.avb.2003.12.002. CrossRef
Kensinger, EA, & Corkin, အက်စ် (2003) ။ အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်နှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု, 3, 378-393 ။ Doi:10.1037 / 1528-3542.3.4.378. CrossRef
Koob, GF, & Volkow, ND (2010) ။ စွဲ၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology, 35, 217-238 ။ Doi:10.1038 / npp.2009.110. CrossRef
Kuss, DJ သမား, & Griffiths က, MD (2011) ။ အင်တာနက်လိင်စွဲ - ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စွဲသုတေသနနှင့်သီအိုရီ, 116, 1-14 ။ Doi:10.3109 / 16066359.2011.588351.
Laier, C. , Schulte, FP, & Brand, M. (၂၀၁၂) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာပြုပြင်ခြင်းသည်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်စွမ်းစွမ်းအားကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်,။ Doi:10.1080 / 00224499.2012.716873.
Lang, PJ, Bradley, MM, & Cuthbert, BN (2008) ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိခိုက်စေရုပ်ပုံစနစ် (IAPS): အကျိုးသက်ရောက်စေပုံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ (နည်းပညာအစီရင်ခံစာ A-8) ။ Gainesville, FL: ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်။
Macapagal, KR, Janssen, အီး, Fridberg, BS, Finn, R. , & Heiman, JR (2011) ။ လိင်မှုနှိုးဆွနိုင်မှု၊ ယောက်ျားလေးနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် Go / No-Go အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်စိတ်မ ၀ င်စားမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40, 995-1006 ။ Doi:10.1007/s10508-010-9676-2. CrossRef
et al မာတင်-Soelch, C တို့, Leenders, KL, Chevalley, AF, Missimer, ဂျေ, Künig, G. အ, Magyar, S. ။ (2001) ။ ဦးနှောက်နှင့်အမှီခို၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများတွင်ယန္တရားများဆုချ: neurophysiological နှင့် neuroimaging လေ့လာမှုများထံမှအထောက်အထား။ ဦးနှောက်သုတေသနဆန်းစစ်ချက်များ, 36, 139-149 ။ Doi:10.1016/S0165-0173(01)00089-3. CrossRef
အများစုမှာအက်စ်, စမစ်, အက်စ်, Cooter, အေ, Levy, ခ, & Zald, D. (2007) ။ အချည်းနှီးသောအမှန်တရား: အပြုသဘောဆောင်နှိုးဆော်အာရုံပျံ့နှံ့လျင်မြန်စွာပစ်မှတ်အမြင်ချို့ယွင်း။ သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် Emotion, 21, 37-41 ။ Doi:10.1080 / 02699930600959340.
Naqvi, N. , Shiv, ခ, & Bechara, အေ (2006) ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အခန်းကဏ္:: တစ် ဦး ကသိမြင်အာရုံကြောသိပ္ပံရှုထောင့်။ စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံအတွက်လက်ရှိဦးတည်, 15, 260-264 ။ Doi:10.1111 / j.1467-8721.2006.00448.x. CrossRef
ပေါလုက, ခ (2009) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် arousal ခန့်မှန်း: တစ်ဦးချင်းခြားနားချက် variable တွေကိုများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 46, 344-357 ။ Doi:10.1080 / 00224490902754152. CrossRef
et al ပေါလု, တီ, Schiffer, ခ, Zwarg, တီ, Krüger, THC, Karama, အက်စ်, Schedlowski, အမ်။ (2008) ။ လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း, 29, 726-735 ။ Doi:10.1002 / hbm.20435. CrossRef
Pawlikowski, အမ်, Altstötter-Gleich, C တို့, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2013) ။ လူငယ်များ၏အင်တာနက်စွဲမှုစမ်းသပ်မှု၏ဂျာမန်တိုတောင်းသောဗားရှင်း၏အတည်ပြုခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 29, 1212-1223 ။ Doi:10.1016 / j.chb.2012.10.014. CrossRef
ချီးမွမ်း, N. , Janssen, အီး, & Hetrick, WP (2008) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏ဆက်နွယ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 37, 934-949 ။ Doi:10.1007/s10508-007-9236-6. CrossRef
Preston, SD က, Buchanan, TW, Stansfield, RB, & Bechara, အေ (2007) ။ လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မျှော်လင့်ထားသည့်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးကျိုးများ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ, 121, 257-263 ။ Doi:10.1037 / 0735-7044.121.2.257. CrossRef
Redouté, ဂျေ, Stoléru, အက်စ်, Grégoire, M.-C. , ကုန်ကျစရိတ်, N. , Cinotti, အယ်လ်, Lavenne, အက်ဖ်, et al ။ (2000) ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း, 11, 162-177 ။ Doi:10.1002/1097-0193(200011)11:3<162:AID-HBM30>3.0.CO;2-A. CrossRef
ရော်ဘင်ဆင်, TE, & Berridge, KC (2001) ။ မက်လုံးပေး - sensitization နှင့်စွဲ။ စွဲလမ်း, 96, 103-114 ။ Doi:10.1080 / 09652140020016996. CrossRef
Rolls, ET (2000) ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex နဲ့ဆုလာဘ်။ ဦးနှောက် Cortex, 10, 284-294 ။ Doi:10.1093 / cercor / 10.3.284. CrossRef
Sachs, bd (2007) ။ အထီးလိင်စိတ်နိုးထတစ် Contextual ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ, 51, 569-578 ။ Doi:10.1016 / j.yhbeh.2007.03.011. CrossRef
Schiebener, ဂျေ, Zamarian, အယ်လ်, Delazer, အမ်, & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2011) ။ အလုပ်အမှုဆောင်တာ ၀ န်များ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များမှသင်ယူခြင်း။ အန္တရာယ်ကျရောက်လွယ်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက်မည်သည့်အရာကတကယ်အရေးကြီးသနည်း။ လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ် Neuropsychology ၏ဂျာနယ်, 33, 1025-1039 ။ Doi:10.1080 / 13803395.2011.595702. CrossRef
Schimmack, U. (2005) ။ စိတ်ခံစားမှုပုံအာရုံကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဆိုးကျိုးများ: ခြိမ်းခြောက်မှု, အဆိုးမြင်အတွေးတွေ, ဒါမှမဟုတ် arousal? စိတ်လှုပ်ရှားမှု, 5, 55-66 ။ Doi:10.1037 / 1528-3542.5.1.55. CrossRef
Shaughnessy, K. , Byers, ES, & Walsh, L. (2011) ။ လိင်ကွဲကျောင်းသားများ၏အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ - ကျား၊ မတူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40, 419-427 ။ Doi:10.1007/s10508-010-9629-9. CrossRef
က Short, MB, Black က, အယ်လ်, စမစ်, AH, Wetterneck, မှန် CT, & ဝဲလ်, DE (2012) ။ အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းမှသုတေသန - အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများနှင့်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကအကြောင်းအရာ။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 15, 13-23 ။ Doi:10.1089 / cyber.2010.0477. CrossRef
Starcke, K. , & အမှတ်တံဆိပ်, အမ် (2012) ။ စိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချ: တစ် ဦး ကရွေးချယ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, 36, 1228-1248 ။ Doi:10.1016 / j.neubiorev.2012.02.003. CrossRef
Stolèru, အက်စ်, Grégoire, MC, Gerard, ဃ, Decety, ဂျေ, Lafarge, အီး, Cinotti, အယ်လ်, et al ။ (1999) ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထ၏ Neuroanatomical Correlate ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 28, 1-21 ။ Doi:10.1023 / A: 1018733420467. CrossRef
Suhr, JA, & Tsanadis, J. (2007) ။ Iowa Gambling Task ၏သက်ရောက်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆက်စပ်မှုများ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 43, 27-36 ။ Doi:10.1016 / j.paid.2006.11.004. CrossRef
ဗန်ဒန် Bos, R. , Harteveld, အမ်, & Stoop, အိပ်ချ် (2009) ။ လူသားများတွင်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - စွမ်းဆောင်ရည်သည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်း cortisol ဓာတ်ပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Psychoneuroendocrinology, 34, 1449-1458 ။ Doi:10.1016 / j.psyneuen.2009.04.016. CrossRef
Vuilleumier, P. (2005) ။ ဘယ်လိုဦးနှောက်သတိထားဖို့: စိတ်ခံစားမှုအာရုံစူးစိုက်မှု၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများ။ သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, 9, 585-594 ။ Doi:10.1016 / j.tics.2005.10.011. CrossRef
Widyanto, အယ်လ်, & Griffiths က, အမ် (2006) ။ "အင်တာနက်စွဲ" - ဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲမှု၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 4, 31-51 ။ Doi:10.1007/s11469-006-9009-9. CrossRef
ပညာရှိ RA (2002) ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry: unsensed မက်လုံးပေးထံမှ Insights ။ အာရုံခံဆဲလျ, 36, 229-240 ။ Doi:10.1016/S0896-6273(02)00965-0. CrossRef
Wright, LW, & အဒမ်, HE (1999) ။ သိမှုဖြစ်စဉ်များအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာကွဲပြားသောလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 36, 145-151 ။ Doi:10.1080 / 00224499909551979. CrossRef
လူငယ်တို့, KS (1998) ။ ပိုက်ကွန်ထဲမှာဖမ်းမိ: အင်တာနက်စွဲ-နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက်အနိုင်ရမဟာဗျူဟာ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို။ နယူးယောက်: Wiley ။
လူငယ်တို့, KS (2008) ။ အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: အန္တရာယ်အချက်များ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆေးကုသမှု။ အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်, 52, 21-37 ။ Doi:10.1177 / 0002764208321339. CrossRef
လူငယ် KS, Pistner, အမ်, O'Mara, ဂျေ, & Buchanan, ဂျေ (1999) ။ ဆိုက်ဘာရောဂါများ - ထောင်စုနှစ်သစ်အတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်မှု။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ၊ 2, 475-479 ။ Doi:10.1089 / cpb.1999.2.475. CrossRef